More Stay, Better Rewards !
ရရှိနိုင်သောအခန်း3အသက္ 4-12 ႏွစ္
ကြိုတင်မှာယူမှုများ2019-02-27 ~ 2020-12-31
ကာလ2019-03-14 ~ 2020-12-31
30 Days Advance Purchase with Breakfast
ကြိုတင်မှာယူမှုများ2019-02-28 ~ 2020-12-31
ကာလ2019-03-28 ~ 2020-12-31
Treat yourself withaluxury ride experience from your doorstep to LOTTE and enjoyapeaceful stay!
ကြိုတင်မှာယူမှုများ2020-07-02 ~ 2020-08-31
ကာလ2020-07-03 ~ 2020-08-31
Retreat your daily grind and surrender to tranquility.
Time to knot your tie with beloved ones at family friendly zone, feast your time
Stepping out to enjoy the fresh air and sun and making memories
ဧည့်သည် အခန်းများ : 343
စားသောက်ဆိုင်များ နှင့် ဘားများ : 5
ထင်ရှားသော ဝန်ဆောင်ထောက်ပံ့မှုများ : Meeting Room, Restaurant, Bar&Lounge, Spa&Sauna, Pool, Fitness, Business Center, Club Lounge
Room size 337.6 m2
Room size 64.7~67.1 m²
Room size 56.3 ㎡
ေနာက္ပိုင္းတြင္ သတင္းစာေစာင္ကို လက္ခံမရရွိလိုပါက၊ဤေနရာကို ႏွိ္ပ္ပါ။
1. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် စုဆောင်းမှု အိုင်တမ်များ - အီးမေးလ် လိပ်စာ
2. စုဆောင်းမှုပြုရသည့် ရည်ရွယ်ချက် နှင့် အသုံးပြုပုံ - သတင်းစာစောင် ပေးပို့မှု
3. ထိန်းသိမ်းမှု နှင့် အသုံးပြုမှု ကာလ - စာရင်းပယ်ဖျက်မှုပြုသည့် အချိန်အထိ